Australia oo ku biirtay dalalka eryaya diblumaasiyiinta u dhashay Ruushka | Arrimaha Bulshada
Home News Australia oo ku biirtay dalalka eryaya diblumaasiyiinta u dhashay Ruushka
Australia oo ku biirtay dalalka eryaya diblumaasiyiinta u dhashay Ruushka
Tuesday, March 27, 2018 News
Bulsha:- Australia ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyey ee erya diblumaasiyiinta Ruushka, taas oo jawaab u ah wareerarkii loo isticmaalay sunta neerfaha waxyeellaysa ee ka dhacay dalka Britain.
Rai’sul wasaaraha Australia, Malcolm Turnbull ayaa sheegay in ficilka Moscow uu ahaa weerar ka dhan ah dimuquraadiyadda iyo madaxbanaanida dal kasta.
” Waa weerarkii ugu horreeyey Yurub dhexdeeda ee loo adeegsado hubka kiimimkada tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka, waxa uu ahaa iskuday dil oo lagasoo shaqeeyay, wuxuu ahaa xad gudub iyo weerar lagusoo qaaday madax banaanida dalka Britain iyo shuruucda waana cambaaraynaynaa gabi ahaanba”
Saddex iyo labaatan dal oo taageraya dalka Britain ayaa hadda eryay boqol iyo lix iyo toban diblumaasi oo Ruush ah.
Waa eryiddii diblumaasiyiinta ee ugu balaarnayd abid tan iyo dagaalkii qaboobaa, Ruushka ayaa ballan ku qaaday in uu jawaab ka bixin doono arrintaas.
Ruushku wuxuu sidoo kale beeniyay in uu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay Salisbury weerarkaas oo lagu qaaday basaas hore oo Ruush ahaa Sergei Skripal iyo gabdhiisa kaas oo xaaladooda khatar galiyey.